Dawladaha Hoose oo ku Fashilmay adeegii Shacabka – Guban Media
May 13, 2018 May 13, 2018 Ali Mohamed 354 Views 0 Comments
Hargeysa–SL, Magaalada Hargeysa oo ah caasimada Jamhuuriyada Somaliland waxaad aad ku arkaysaa qashinka iyo uskaga rasaysan laamiyada halbawlayaasha ee dhex mara. Sidoo kale marka ay roobabku da,aan, wadooyinku badanaa way go,aan oo ciid iyo dhagaxaan baa qariya, amaba godad baa ka dilaaca kuwaasi oo hakiya isku socodka gaadiidka magaalada dhexdeeda taasi oo ay ahayd in ay dawladda hoose aad uga shaqeyso una feejignaato.
Muwaadin aqoon intee le,eg baad u leedahay dawladda hoose ee degmadaada? Waa maxay xidhiidhka idinka dhexeeyaa? Waa maxey waajibaadka ay tahey iney kasoo baxaan xildhibaanada dawladda hoose ee Degmadaadu? Maxaa adiga kugu waajib ah si ay u shaqeyso dawladda Hoose ee magaaladaadu? Ma taqaanaa shaqada Duqa(Mayor)/ku xigeenkiisa, Xoghayhaha, Guddiga fulinta, Guddiga Joogtada ah & guud ahaanba xildhibaanada Gollaha Deegaanku? Ma taqaanaa adeegyada loo baahan yahay inay qabato dawladda hoose ee Degmadaadu?
Hawlaha Dawladaha hoose ay qabtaan waxaa ka mid ah: Kobcinta iyo kor u qaadista arrimaha bulshada, sida waxbarashada, caafimaadka, biyaha, laydhka, nadaafadda,Samaynta iyo dayac tirka wadooyinka.
Sidee bay ku dhacday ina Hargeisa ay noqoto caasimda keliya ee dunida oo lahayn “Traffic light”?
Haddii aad saluugto wax qabadka xildhibaanadii aad soo dooratey awoodaada maku kala diri kartaa? Wali ina dib ma u eegtay xeerarka la xidhiidha Dawladaha Hoose si cilmiyeysana ma ugu dabaqday waaqaca jira? Horumar intee le,eg bay ku talaabsatey degmadaadu tobankii (10) sanadood ee u danbeeyay?
Dastuurka qaranka JSL iyo xeerarka ka sii farcama oo uu ugu balaadhan yahey xeerka ismaamulka Gobollada & Degmooyinka JSL Xeer Lam 23 waxa ay si fiican u qeexayaan dhamaanba su,aalaha kor ku xusan. Shacabku waa inuu isku baraarujiyaan in ay ogaadaan xeerarka & shuruucda dalka guud ahaan.
Gole Deegaan muxuu yahey? Waa Gole degmo laga soo doortay. Tusaale Caasimada Hargeysi waxay leedahay shan & labaatan (25) xildhibaan oo ay sida xeerku dhigayo tahey in ay soo doortaan dadka deegaanka u ah caasimada maadama ay yihiin dadkii matalayey bulshada ku dhaqan Degmadaa. Hanaanka saxda ah ee loo dooran lahaa waxay ahayd in degmo kastaa sida Axmed-Dhagax ay tiro xildhibaano ah soo xulato iyada oo shuruuda koobaad ay tahay in ay shanta ama afarta xaafadood ee degmadaa kala degan yihiin kana soo toosaan. Si ay dadka degmadaasi baahiyahooda si fudud ugu gudbin karaan dabadeena si fudud cabashooyinkooda kalfadhiyada loogu gudbiyo.
Bulshada Somaliland waxay u badan tahay bulsho dhag kaliya wax ka maqasha , dhagtaasina waa dhagta dhanka qabiilka xigta, waa meel aynu ka damqano meesha ugu nugul. Lawaa in aynu si balaadhan wax u eegno, iinta taa inoo dheerina waxay tahay fiirsasho la,aan iyo fahan gaabni ay inoo raacdey tixraac la,aan oo aan ula jeedo in aynu hore u ahayn bulsho hadal (oral society) cilmigii iyo ilbaxnimadiina aanay waxba inaga badelin. Oo kii wax bartey iyo kii miyiga xoolaha ku raacayey ee aan aqoon diineed & tu duunyo toona hayn ay isku si wax u arkayaan una naqdinayaan.
← Kenya’s top prosecutor orders probe into collapse of dam
Niger drone video shows US forces fighting for their lives →